Otú nyefee kọntaktị site na iPhone na kọmputa na site na kọmputa na-iPhone
Chọrọ nyefee iPhone kọntaktị na kọmputa maka ndabere ma ọ bụ ígwè obibi akwụkwọ, ma achọghị ka mmekọrịta ka Google akaụntụ? Ọhụrụ iPhone na ugbu a chọrọ nyefee kọntaktị site na kọmputa na ya? Ọ bụ otu nke achicha. The akụkụ n'okpuru na-enye gị ihe ngwọta dị mfe na-eme ka ya. Dị na-agụ na.
Part 1. Olee nyefee kọntaktị site na iPhone na kọmputa Part 2. Olee nyefee kọntaktị site na kọmputa na-iPhone
Part 1. Olee nyefee kọntaktị site na iPhone na kọmputa
Ihe kacha ụzọ idetuo iPhone kọntaktị na kọmputa bụ ịjụ enyemaka si a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ. Wondershare TunesGo bụ ihe iPhone na kọmputa transfer software na-enyere aka Detuo ha niile ma ọ bụ kọntaktị ahọrọ si iPhone na kọmputa. The kọntaktị nwere ike ịbụ Chekwa dị ka otu ma ọ bụ multiple vCard faịlụ (s), ma ọ bụ a CSV faịlụ.
Nyefee na kọntaktị, music, photos, video na ozi site na iPhone na kọmputa mfe.
Export iPhone kọntaktị na kọmputa na-azọpụta vCard faịlụ (s) ma ọ bụ a CSV faịlụ.
Mmekọrịta iPhone kọntaktị na Outlook, Windows Akwụkwọ Adreèsị & Windows Live Mail.
Tinye, dezie iPhone kọntaktị, ma jikota oyiri ndị na kọmputa.
Mmekọrịta kọntaktị site na kọmputa na-iPhone na batches.
Jikwaa kọntaktị na ebe nchekwa ekwentị, iCloud, Yahoo !, Hotmail, wdg mfe.
Na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè na iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5 / 5C / 3GS / 4 / 4G na-agba ọsọ iOS 9/8/7/5/6.
Olee otú mmekọrịta kọntaktị site na iPhone na kọmputa
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPhone na kọmputa na-agba ọsọ na ngwá ọrụ
Mgbe nbudata, wụnye iPhone na kọmputa kọntaktị transfer ngwá ọrụ na kọmputa. Ikwunye na a UBS USB jikọọ gị iPhone ka computer.Once ghọtara, gị iPhone-egosi na n'elu ke akpan window.
Nzọụkwụ 2. Mmekọrịta iPhone kọntaktị na kọmputa
-Aga n'aka ekpe sidebar, pịa triangle esote Ndi ana-akpo. Nke a na-elu niile na kọntaktị catelogories. Họrọ otu udi, dị ka On My iDevice ma ọ bụ iCloud. Mgbe ahụ, kọntaktsị na Atiya egosi elu na nri.
Họrọ gị chọrọ kọntaktị na pịa Import / Export> Export kọntaktị ahọrọ> Export All Ndi ana-akpo. A ndọpụta ndepụta Pop elu. Iji zọpụta iPhone kọntaktị na kọmputa, ị nwere ike họrọ ka a Single vCard File, ka otutu vCard Files ma ọ bụ na-CSV File. Mgbe ahụ, na-agagharị kọmputa gị ga-a ọnọdụ ịzọpụta exported kọntaktị.
Cheta na: Na nke a iPhone na kọmputa transfer ngwá ọrụ, ị nwekwara ike mbupụ iPhone kọntaktị na Outlook Express, Outlook 2003/2007/2010/2013, Windows Akwụkwọ Adreèsị na Windows Live Mail.
Part 2. Olee nyefee kọntaktị site na kọmputa na-iPhone
Ọ bụrụ na ị synced kọntaktị na iCloud ma ọ bụ Gmail tupu, ugbu a, i nwere ike n'ụzọ dị mfe inwe kọntaktị azụ gị iPhone. Ma, i nwere ike iji ọzọ ngwá ọrụ iji bubata kọntaktị na kọmputa na-iPhone. Ebe a, m na-egosi gị otú ị ka mmekọrịta Gmail kọntaktị na iPhone na otú iji Wondershare TunesGo mbubata kọntaktị site na VCF / CSV faịlụ ka iPhone.
Mmekọrịta Gmail kọntaktị na iPhone
Import CSV / VCF faịlụ ka iPhone
1. Bulite kọntaktị site na kọmputa na-Gmail
Nzọụkwụ 1. Open Google nchọgharị na internet. Banye na akaụntụ gị na ala Gmail page.
Nzọụkwụ 2. Na ekpe kọlụm, pịa Gmail> Ndi ana-akpo na-egosi na kọntaktị akara panel.
Nzọụkwụ 3. Click Ọzọ na-egosi ya esiri-ala menu. Họrọ Import .... Na mmapụta dialog, pịa Họrọ File.
Nzọụkwụ 4. Chọgharịa gị na kọmputa na-ahụ zọpụta CSV ma ọ bụ vCard faịlụ ebe kọntaktị na-azọpụta. Mgbe ahụ, pịa Open> Bubata mbubata gị chọrọ kọntaktị na Gmail.
2. mmekọrịta Google kọntaktị na iPhone
Nzọụkwụ 5. On gị iPhone na-agba ọsọ iOS 5/6, mgbata Ntọala. Gbadaa na chọta Mail, Ndi ana-akpo, kalenda. Enweta Tinye Akaụntụ ma họrọ Google.
Nzọụkwụ 6. Dejupụta aha gị, Email, paswọọdụ na nkọwa. (Tụgharịa na netwọk Wi-Fi).
Nzọụkwụ 7. Kpatụ Next na-atụgharị na Ndi ana-akpo. Mgbe ahụ, enweta Save ka mmekọrịta Gmail kọntaktị na iPhone. Mgbe mmekọrịta na-okokụre, na-aga Ndi ana-akpo ngwa na Google kọntaktị ga-ezi ezi n'ebe ahụ.
Cheta na: Ọ bụrụ na gị iPhone na-agba ọsọ iOS 7, pịa ebe a ịmụta otú mmekọrịta Gmail kọntaktị.
Ọ bụrụ na ị na-achọghị ka mmekọrịta Gmail na kọntaktị na chọrọ mfe n'ụzọ, na Wondershare TunesGo bụ ezi nhọrọ. Ọ na-enye gị ka ị na bubata kọntaktị a otu ma ọ bụ multiple VCF faịlụ (s), a CSV faịlụ, Outlook, Windows Live Mail na Windows Akwụkwọ Adreèsị ka iPhone effortlessly.
Nzọụkwụ 1. Bilie gị iPhone ejikọrọ site eriri USB na-agba ọsọ ahụ ngwá ọrụ
Ka malitere, wụnye ngwá ọrụ a na kọmputa gị. Mgbe ahụ, na-agba ya. Jikọọ gị iPhone na kọmputa site na eriri USB na-abịa na gị iPhone. Ngwá ọrụ a ga-ntabi ịchọpụta gị iPhone na mgbe ahụ na-egosipụta ya ọmụma na-ekpe na-n'akụkụ kọlụm nke bụ isi window.
Nzọụkwụ 2. Paghaa kọntaktị site na kọmputa na-iPhone
Mgbe ahụ, pịa Ndi ana-akpo na ekpe-n'akụkụ kọlụm iji bugote kọntaktị management window. Pịa Import / Export> Bubata kọntaktị site na kọmputa.
Na ndọpụta ndepụta, họrọ site na nke ị na-ekpebi bubata kọntaktị. Ka ihe atụ, ị nwere ike họrọ si vCard faịlụ. Mgbe obere faịlụ nchọgharị windo na-egosi, na-ahọrọ gị chọrọ VCF faịlụ (s), CSV faịlụ. Mgbe ahụ, bubata kọntaktị site na kọmputa na-iPhone.
Otú nyefee iPhone Ndi ana-akpo ka vCard File?
Olee otú ndabere iPhone Ndi ana-akpo ka Gmail?
Olee otú Detuo Photo Library si iPhone ka Computer?
Olee otú Bugharịa Igwefoto Roll si iPhone ka Computer?
Otú nyefee ngwa site iPhone ka Computer?
Tansee iPhone Nyefee SMS Alternative nyefee SMS?
Free Alternatives ka iTunes n'ihi na ị na Jikwaa iPhone
Otú nyefee listi ọkpụkpọ site na iPhone ka iTunes?
> Resource> iPhone> otú nyefee Ndi ana-akpo si iPhone ka Computer na site na kọmputa na-iPhone